Af-Soomaali (Somali) |
Waxaad sameyn kartid hadii immigrationku ku gabto:
Hadi UK Border Agency ama policeku ku joojiyo oo lagu weydiiyo sharciga aad dalka ku joogtid:
– Waajib kugu ma aha inaad u jawaabtid.
– Waajib kugu ma aha inaad magacaaga iyo adreskaaga u sheegtid.
– Usheeg inaad dooneeyn inaad lahadashid.
– Kalsooni muuji laakinse si ixtraam leh ula hadal.
– Waad iskaga dhaqaaqi kartaa hadii aad doontid.
Ku ma joojin karaan midabkaaga awgi. Waxay ku joojin karaan hadi ay sabab rasmiya ay haystaan. Hadey kuu joojiyaan sidaad u eegtahay, ama luugada aad ku hadlaysid awgeed, waxaad ku tiraahda:
‘Wa cunsirinimo.’ ‘Waa sharci daaro.’ ‘Waan ku dacweeynaya.’
Hadi lagu xiro, waxaad la xiriirta ”Bail for Immigration Detainees” oo caawiya dadka xiran oo doonaya sii deen (way naga madax banaan yihiin): 020 7247 3590
Posted in Af-Soomaali